Umthetho Wezindlu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Umthetho wezindlu
Ngaba ukulahlwa kwamanzi ukulahlwa kwamanzi?
Ngaba ukulahlwa kwamanzi amdaka kukugungxula? Unikezelo lwamanzi nogutyulo lwelindle nazo ziy comm. iintlawulo. b. ukusuka kumxholo wesivumelwano sakho kulandela ngokoqobo ukuba unikezelo lwamanzi (amanzi ashushu nabandayo) ahlawulwa ngumqeshi, njalo njalo. iinkonzo- ...
Ufuna nini ukujonga xa uthengisa indlu?
Ndifuna nini ukujonga xa ndithengisa indlu? Njengoko uvumelana nomthengi, kuya kufuneka ujonge. Umntu othile uyoneliseka ngexesha lokuhanjiswa kwamaxwebhu, umntu emva koko. Umzekelo, sahlule imali kwiiphakheji ezi-3- ...
Ndine-counter-SGV-15 2007g Ayikho ipasipoti, ilahlekile. Kwaye i-Criminal Code efunekayo ukunika ithuba lokuqinisekisa kwi-counter
Ndine counter SGV-15 2007 Akukho paspoti, ilahlekileyo. Kwaye iKhowudi yoLwaphulo-mthetho inyanzelekile ukuba inike isithuba sokulinganisa kwimitha Bhala ingxelo kwiKhowudi yoLwaphulo-mthetho kwaye ubonise ukuba ipasipoti ilahlekile, ndicela ukuba uthumele ummeli wakho ...
Ngubani omele alungise iibhokisi zeposi kwizakhiwo zendlu?
Ngubani omele alungise iibhokisi zeposi kwisakhiwo sendlu? Ukuziqhelanisa kubonisa ukuba ukhetho lunokwenzeka. Ewe iibhokisi zeposi ziyipropathi yabahlali. kodwa umsebenzi ofanelekileyo "ngePosi yaseRussia" uyakuvumela ukuba ufake iibhokisi zeposi ezintsha ...
Isatifiketi esingabhalwanga sokuthenga nokuthengwa kweentengiso
Isatifikethi esaziwayo sokuba HOLOST uthenge kwaye uthengise izindlu nomhlaba Esi ayisosatifikethi, kodwa ingxelo ebhaliweyo kwabasemagunyeni obhaliso ukuba awutshatanga. Ixabiso lokukhutshwa li-100 ...
Zingaphi iinkonzo zegqwetha ekuxhaseni ukuthengiswa kwefulethi?
Ixabisa malini igqwetha ukuxhasa intengiselwano yokuthenga kunye nokuthengisa? Ndingacebisa uMgangatho wearhente yokuthengiswa kwezindlu. Ndithenge indawo yokuhlala kubo, yonke into ibonakala ilungile, sekuyiminyaka emi-3 sele ikhona. Ewe), ngokomgaqo ...
Indlela yokudibanisa umbane ngokwawo emva kokunqanyulwa kokungahlawulwanga?
ungawuqhagamshela njani umbane ngokwawo emva kokuqhawula ukungahlawuli? Umbuzo ngulo, ngaba inkqubo yokuqhawula intambo ilandelwa ngokungahlawuli umbane osetyenzisiweyo? Umboleki wombane kwimeko yokungahlawuli umbane osetyenzisiweyo ungeniswa ngokuyinxalenye ...
Isampula Isicelo kwiZhek
Isampulu yesicelo kwiofisi yezindlu kwifomu yasimahla andinakukucebisa kuyo nayiphi na isampulu, kuba andisebenzi ngeetemplate. Kodwa ndingakucebisa ukuba ungabhali sikhalazo esihlangeneyo. Wonke umntu kufuneka abhale ...
Yaye apho ufumana inkontileka yokurenta yentlalo
Kwaye ungayifumana phi ikhontrakthi yengqesho kwezentlalo ukuba ikhuphe kwaye iqukumbele. ukuba akunjalo. kodwa uhlala kwindlu kamasipala ngokwemiqathango yerente yentlalo. Yiya ngokupheleleyo. umzimba uya kuphumeza. abasemagunyeni kwindawo yokuhlala- ...
Uthini umahluko phakathi kweendawo zokuhlala kunye namafulethi?
Uyintoni umahluko phakathi kwenqanaba lendawo yokuhlala kunye nendawo yokuhlala? Urhudo lomlomo lolunye uhlobo. Umxholo "weendawo zokuhlala" ubanzi kakhulu kunombono we "apartment", kuba inokuthetha indlu eyahlukileyo negumbi ...
Ukubaluleka komhlaba karhulumente kwintsebenziswano ye-dacha!
Ukwabelwa umhlaba oqhelekileyo kwintsebenziswano yedacha! Imihlaba eqhelekileyo okanye imihlaba yepropati yomntu wonke kwimibutho yegadi ziindlela abagadi begadi abaqhubela kuzo ukuya egadini yabo ...
Ngaba kunokwenzeka ukubhalisa umntwana kumakhulu ukuba abazali babhaliswe kwenye indawo?
Ngaba kunokwenzeka ukubhalisa umntwana kuninakhulu ukuba abazali babhalisiwe kwenye indawo? Indawo yokuhlala komntwana ongafikanga kubudala be-10 yindawo yokuhlala yabazali bakhe okanye omnye wabazali, ene ...
Intlawulo ye-ODPU Icandelo loMphathiswa Wezophuhliso Lommandla we-Russian Federation ngeleta 13.03.2012-AP / 5243 yomhla we-14 Matshi 6 inika ingxelo yoku kulandelayo. Ngomhla we-2011 kaMeyi ngo-354, ngo-Ummiselo wama-XNUMX kaRhulumente wase-Russian Federation, izilungiso zavunywa ukuba zenziwe kwiMithetho yokubonelela ...
Yintoni edibeneyo kwindawo yokufudumala yegumbi-ikorridi, loggia, ipryry?
Yintoni ebandakanyiweyo kwindawo efudumeleyo yefriji-ipaseji, iloggia, igumbi lokugcina? Iipaseji ngokuqinisekileyo, i-loggia-hayi. I-pantry, ukuba ngaphakathi, nayo ifakiwe. ipaseji kunye negumbi lokugcina azifakwanga kwindawo yokuhlala, kwaye ukufudumeza kuhlawulwa ngokwe ...
Iyintoni intsingiselo yobunini bomhlaba phantsi kwesakhiwo sezindlu?
Yintoni inqaku lokwenza umhlaba ube ngowakho ukuze ubenendawo yokuhlala? Ayisiyiyo kuphela NGAPHANTSI, kodwa ikufuphi nendlu ... Kwimeko yommandla wabucala, abaniniwo banelungelo lokuyisebenzisa ngokubona kwabo, ngaphandle kokucela imvume ...
Ukutshintshwa kwendawo yokuhlala kamasipala
Ukutshintshiselana ngendlu kamasipala, zama ukufumana iindlela ezimbalwa ezinamagumbi. ukuze imifanekiso ihambelane kwaye omnye ummelwane wayehlala kwigumbi lokuhlala. kwaye nokuba yeyiphi na indawo ekuya kuba yiyo, eyona nto ibalulekileyo kukuba igumbi lokuhlala likhona ...
kuthetha ntoni ukuhlala kwiflethi yokuhlala ngokwentlalo?
kuthetha ntoni ukuhlala kwiflethi yokuhlala ngokwentlalo? Igumbi likarhulumente aliboniswanga bucala, ke usapho luhlala ekuqeshweni kwezentlalo abanalungelo lokurenta igumbi, abanalungelo lokuthenga ngaphambi kwelinye igumbi ...
Iyintoni inkunkuma eyomeleleyo?
Yintoni iMSW ??? раарворарашрагырарваорврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс MSW imali yinxalenye ukugcinwa kwipropati eqhelekileyo. Ikhontraktha yakho ihlawuliswa phantsi kobugcisa. 14.7 yeKhowudi yoLawulo yeRussian Federation evela eRospotrebnadzor. ukukhuhlana kwenkunkuma yebhayoloji. Udinga inkunkuma yasekhaya ...
Ndixelele, nceda, imimiselo yentlawulo yezinto ezisetyenziswayo?
Ngaba ungandixelela imigaqo yokuhlawulwa kwezinto eziluncedo? Ngokuhambelana nesivumelwano. kude kube ngumhla weshumi wenyanga nganye. Iirisithi zakho zifika emva kwexesha, ke azinalo ixesha lokubala kwikhawuntara. Umalunga ...
indlela yokufumana i-13% yokuthengwa kwezindlu kunye nawaphi amaxwebhu aya kufunwa?
indlela yokufumana i-13% yokuthengwa kwendlu kwaye ngawaphi amaxwebhu afunekayo? Isatifikethi somvuzo 2 irhafu yengeniso yomntu, isivumelwano sokuthenga kunye nentengiso, isatifikethi sobunini, iyafuneka, irisithi yomthengisi yokufumana imali kuwe ...
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,780.